Tamarta Nukliyeerka: faa'iidooyinka iyo khasaaraha ugu weyn | Dib -u -cusboonaysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 27/08/2021 10:00 | Tamarta nukliyeerka
In laga hadlo tamarta nukliyeerka waa in laga fekero masiibooyinka Chernobyl iyo Fukushima ee dhacay 1986 iyo 2011, siday u kala horreeyaan. Waa nooc ka mid ah tamarta oo soo saarta cabsi gaar ah halisteeda darteed. Dhammaan noocyada tamarta (marka laga reebo kuwa dib loo cusboonaysiin karo) waxay u keenaan saamayn deegaanka iyo bini -aadamka, inkasta oo qaarkood ay sidaas u sameeyaan si ka badan kuwa kale. Xaaladdan oo kale, tamarta nukliyeerku ma soo saarto gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo inta lagu guda jiro soo -saarkeeda, laakiin taasi micnaheedu maahan inaysan si xun u saamaynayn deegaanka iyo dadka labadaba. Way badan yihiin faa'iidooyinka iyo khasaaraha tamarta nukliyeerka qofka bini'aadamka ahna waa inuu mid walba qiimeeyaa.
Sidaa darteed, maqaalkan waxaan diiradda ku saari doonnaa sharraxaadda waxa ay yihiin faa'iidooyinka iyo khasaaraha tamarta nukliyeerka iyo sida ay u saameyso dadweynaha.
1 Waa maxay tamarta nukliyeerka
2 Faa'iidooyinka iyo khasaaraha tamarta nukliyeerka
3 Sida tamarta nukliyeerka u saameyso deegaanka
Waa maxay tamarta nukliyeerka
Waxa ugu horreeya oo dhan waa in la ogaado waxa tamarta noocan ahi tahay. Tamarta nukliyeerka waa tamarta aan ka helno fission (qaybinta) ama isku -darka (isku -darka) atamka ka samaysan maaddada. Dhab ahaan, Tamarta nukliyeerka ee aan isticmaalno waxaa laga helaa soo -saaridda atamka yuraaniyamka. Laakiin ma aha oo kaliya uranium kasta. Inta badan la isticmaalo waa U-235.
Taa bedelkeeda, qorraxda maalin walba soo baxda ayaa ah falceliyaha isku -dhafka nukliyeerka ee weyn oo dhalin kara tamar badan. Si kasta oo ay nadiif iyo ammaan u tahay, awoodda nukliyeerka ugu habboon ayaa ah isugeyn qabow. Si kale haddii loo dhigo, habka isku -dhafka, laakiin heerkulku wuxuu u dhow yahay heerkulka qolka marka loo eego heerkulka ba'an ee qorraxda.
In kasta oo isugeyn la baranayo, haddana xaqiiqadu waxay tahay in noocan tamarta nukliyeerka ah kaliya loo tixgeliyo aragti ahaan mana u muuqato inaan ku dhownahay inaan gaarno. Taasi waa sababta tamarta nukliyeerka ee aan had iyo jeer maqalnay oo aan ku xusnay halkan ay tahay fission of atamka yuraaniyamka.
Faa'iidooyinka iyo khasaaraha tamarta nukliyeerka
In kasta oo ay leedahay macno xun, haddana waa in aan lagu xukumin wararka iyo xitaa filimada ku saabsan shilalka iyo qashinka shucaaca. Xaqiiqdu waxay tahay in awoodda nukliyeerka ay leedahay faa'iidooyin badan. Kuwa ugu muhiimsan waa kuwan soo socda:
Tamarta nukliyeerka ayaa nadiif ku ah habka wax soo saarkeeda. Dhab ahaantii, inta badan soo -saarayaasha nukliyeerka ayaa kaliya uumiga ku bixiya uumi biyo aan dhib lahayn. Ma aha kaarboon laba ogsaydh ama methane, ama gaas ama gaas kale oo wasakhaynaya ayaa keena isbedelka cimilada.
Qiimaha koronto dhalintu waa yar yahay.
Sababtoo ah awoodda xooggan ee tamarta nukliyeerka, tamar aad u badan ayaa laga dhalin karaa hal warshad.
Waa wax aan dhammaad lahayn. Dhab ahaantii, khubarada qaar ayaa aaminsan inay tahay inaan u kala saarno tamar la cusboonaysiin karo, maxaa yeelay kaydadka yuraaniyamka ee hadda jira waxay sii wadi karaan inay soo saaraan tamar la mid ah tan kumanaan sano.
Jiilkiisu waa joogto. Si ka duwan ilo badan oo tamarta la cusboonaysiin karo (sida tamarta qorraxda oo aan la abuuri karin habeenkii ama dabayl aan la abuuri karin dabayl la'aan), wax -soo -saarkeedu waa mid aad u weyn oo joogto ah boqolaal maalmood. 90% ee sannadka, marka laga reebo dib -u -buuxinta jadwalka iyo xiritaanka dayactirka, awoodda nukliyeerka waxay ku shaqeyneysaa awood buuxda.
Sidaad filan karto, awoodda nukliyeerka ayaa sidoo kale leh qasaarooyin gaar ah. Kuwa ugu waaweyn waa kuwan soo socda:
Qashinkeeda waa mid aad khatar u ah. Guud ahaan, waxay taban yihiin caafimaadka iyo deegaanka. Qashinka shucaaca leh ayaa si xun u wasakhaysan oo dilaa ah. Hoos -u -dhacdiisu waxay qaadataa kumanaan sano, taasoo ka dhigaysa maamulkeeda mid aad u jilicsan. Runtii, tani waa dhibaato aynaan wali xalin.
Shilku wuxuu noqon karaa mid aad u daran. Warshadaha tamarta nukliyeerka waxaa lagu qalabeeyaa tallaabooyin badbaado oo wanaagsan, laakiin shilal ayaa dhici kara, xaaladdan shilku wuxuu noqon karaa mid aad u daran. Jasiiradda Saddexda Mayl ee Maraykanka, Fukushima oo ku taal Japan ama Chernobyl oo ku taal Midowgii Soofiyeeti ee hore ayaa tusaale u ah waxa dhici kara.
Waa bartilmaameedyo nugul. Hadday tahay masiibo dabiici ah ama fal argagixiso, warshad tamarta nukliyeerka ayaa ah bartilmaameed, haddii la burburiyo ama la dhaawaco, waxay keenaysaa khasaare aad u weyn.
Sida tamarta nukliyeerka u saameyso deegaanka
In kasta oo mudnaanta laga yaabo inay u muuqato inay tahay tamar aan soo saarin gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo, tani run ma ahan run. Haddii la barbardhigo shidaalka kale, waxay leedahay ku dhawaad ​​qiiqa aan jirin, laakiin weli way joogaan. Warshadda korontada kuleylka, gaaska ugu weyn ee lagu sii daayo jawiga waa CO2. Dhinaca kale, warshadda quwadda nukliyeerka qiiqa ayaa aad uga hooseeya. CO2 waxaa la sii daayaa oo kaliya inta laga soo saarayo yuraaniyamka iyo u gudbinta warshadda.
Xaddiyo badan oo biyo ah ayaa looga baahan yahay inay qaboojiyaan walxaha la isticmaalay intii lagu guda jiray hawlihii nukliyeerka. Tan waxaa loo sameeyaa si looga hortago in heerkulka halista ah lagu gaaro dareeraha. Biyaha la isticmaalo waxaa laga qaadaa wabiyada ama badda. Marar badan waxaad biyaha ka dhex heli kartaa xayawaanka badda oo aakhirka dhinta marka biyuhu kululaadaan. Sidaas si la mid ah ayaa biyaha loogu soo celiyaa deegaanka iyadoo heerkulkiisu sarreeyo, taasoo keenta in geedaha iyo xayawaankuba dhintaan.
Shilalka suurtagalka ah
Shilalka ka dhasha warshadaha tamarta nukliyeerka ayaa aad u yar, laakiin aad u khatar badan. Shil kasta ayaa soo saari kara masiibo baaxad aad u weyn leh, labadaba heer deegaan iyo bini -aadanba. Dhibaatada shilalkan waxay ku jirtaa shucaaca ku soo qulqulaya deegaanka. Shucaacani wuxuu dilaa geedka, xayawaanka ama qof kasta oo soo ifbaxa. Intaa waxaa dheer, waxay awood u leedahay inay ku sii jirto deegaanka muddo tobanaan sano ah (Chernobyl weli lama degi karo heerarka shucaaca awgeed).
Marka laga soo tago shilalka nukliyeerka ee suurtagalka ah, qashinka la soo saaray wuxuu sii jiri karaa kumanaan sano ilaa uusan ka noqon shucaac. Tani waxay khatar ku tahay dhirta iyo xayawaanka meeraha. Maanta, daaweynta qashinkani leeyahay waa in lagu xidhaa xabaalaha nukliyeerka. Qabuurahan waxay qashinka ku xiraan shabbad iyo go'doon waxaana la dhigaa dhulka hoostiisa ama badda hoosteeda si uusan u faddarayn.
Dhibaatada maareynta qashinkaan ayaa ah inay tahay xal muddo gaaban ah. Kani waa, muddada qashinka nukliyeerka uu sii ahaado shucaaca ayaa ka dheer cimriga sanduuqyada taas oo ay ku shaabadeeyeen.
Shucaac, si ka duwan wasakhowga kale, wax ma urin kartid mana arki kartid. Waa waxyeello u leh caafimaadka waxaana la hayn karaa tobanaan sano. Marka la soo koobo, tamarta nukliyeerka waxay u saamayn kartaa dadka siyaabaha soo socda:
Waxay keentaa cillado hidde ah.
Waxay keentaa kansar, gaar ahaan tayroodh, mar haddii qanjidhkani nuugo iodine, inkasta oo uu sidoo kale keeno burooyinka maskaxda iyo kansarka lafaha.
Dhibaatooyinka dhuuxa lafta, taas oo iyana keenta leukemia ama dhiig -yaraan.
Waxay daciifisaa nidaamka difaaca, taas oo kordhisa halista caabuqyada.
Dhibaatooyinka maskaxda, gaar ahaan walaaca shucaaca.
Isku -uruurinta sare ama dheer waxay keentaa dhimasho.
Iyada oo ku saleysan wax kasta oo la arkay, waxa ugu habboon ayaa ah in la helo dheelitir u dhexeeya adeegsiga kala duwan ee tamarta iyada oo la kordhinayo tamarta la cusboonaysiin karo iyo in la horumariyo kala -guurka tamarta. Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan faa'iidooyinka iyo khasaaraha tamarta nukliyeerka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta Caadiga ah » Tamarta nukliyeerka » Tamarta Nukliyeerka: faa'iidooyinka iyo khasaaraha
Waa maxay plankton